Dadkuba Ha Ila Yaabeene! Jaceylkaagu Waa Waxa Keliya Aanan Fileyn Inaan Ka Shalaayo. | Gaaloos.com
Home » galmada » Dadkuba Ha Ila Yaabeene! Jaceylkaagu Waa Waxa Keliya Aanan Fileyn Inaan Ka Shalaayo.
Dadkuba Ha Ila Yaabeene! Jaceylkaagu Waa Waxa Keliya Aanan Fileyn Inaan Ka Shalaayo.
Waxaan mararka qaar la yaabaa inaad adiguna dareento sidaan ahay camal,waxaan isweydiiyaa inaad iga fekerto,oo adigoo aamusan aad magaceyga iigu yeerto,ma dhici kartaa anigoon kula joogin inaad muuqaalkeyga aragto.
Bilowgii waxaan u maleeyey iney tahay been,ma fileyn inaad xad sidaan u dheer gaari doono,waxey la aheyd iney wax qaldan yihiin,laakin hada ma joojin karo ka fekerida meel walbo oo aad joogto.
Title: Dadkuba Ha Ila Yaabeene! Jaceylkaagu Waa Waxa Keliya Aanan Fileyn Inaan Ka Shalaayo.